QT xafiiska Kingsoft | Laga soo bilaabo Linux
QT xafiiska Kingsoft
Waxaan ku waashay qodobbada daciifka ah ee GNU / Linux mid ka mid ah qodobbadaas ayaa isku dayaya in ay toos ula tartamaan xafiiska Microsoft.
Waxaan qabaa taas Firefox y chromium ku guuleysto aqlabiyad goobeed qeybtooda biraawsarka iyo maalmo ka hor waan la hadalnay cusub Xusuusin isticmaalka QT .
Sidoo kale maalmo kahor waxaan booqday bogga Xafiiska Kingsoft loogu talagalay GNU / Linux (Marwalba waxaan u sameeyaa xiisaha) waxaanan la kulmay warka ah in shirkaddu raadineyso horumariyeyaal ka caawiya tarjumaadda luqad kasta iyo oh, la yaab! Waxaan ogaaday in Kingsoft Office GUI ay adeegsato QT.
Adiga ayaa ka arki kara xiriiriyahan.
Noodhka ka caawinaya tarjumaadda Kingsoft Office waxaa laga heli karaa:
Intaa waxaa dheer, Kingsoft Office ALPHA 12 ee GNU / Linux hadda waa la heli karaa:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » QT xafiiska Kingsoft
Sidee QT u noqotay moodo. Waa hagaag, sabab.
Maqaal wanaagsan. Ma aanan aqoonin codsigan.
Faa'iidooyin badan ayaa ku jira isticmaalka Qt.
Marka hore, Qt waa iskutallaab, wuxuu si fiican ula jaan qaadayaa JAVA iyo luqadaha kale ee C ++ ee walxaha ay adeegsadaan Xafiiska Kingsoft.
Maaddaama Qt uu yahay qaab-dhismeed ballaadhan, uma baahnid inaad diidid is-dhexgalka garaafyada, maxaa yeelay maktabadaha ayaa horay loogu waafajiyay nidaam kasta oo hawlgal.
Si kale haddii loo dhigo, barnaamijku wuxuu si fiican ugu eegi doonaa Windows, Mac OS, GNU / Linux, iwm.
LibreOffice waa inay isticmaashaa balastarka isdhexgalka maxaa yeelay maktabadaha duugga ah kama shaqeeyaan waddankooda GNU / Linux waana tusaysaa.
runta ma aqaano xafiiska Kingsoft waxaan u isticmaalaa libreoffice waxba si aan uga maseyro winbug sifiican ayuu u shaqeeyaa isdhexgalka ayaa wanaagsan oo wax dhib ah iguma qabin waxaan abuuri karaa dukumiintiyo waxaan u gudbin karaa qaabab winbug ah taas bedelkeedana waxaan u isticmaali karaa U waxaad dooneysaa inaad raadiso dhibco daciif ah ka fiiri daaqadaha aad heli doonto maalin kasta iyo habeen walbana caajis ma heli doontid maxaa yeelay waxaa jira malaayiin hadaad rabto inaad ka raadsato dhibco daciif ah gnu / Linux raadi mid runtii u qalma taas arrimaha ama ahmiyad gaar ah u leh ikhtiyaarrada bilaashka ah ee xafiiska waxaa jira kuwa badan oo aan la joogo la-talinta
iyo Xafiiska Kingsoft waxaan rajeynayaa inay si wanaagsan u socoto oo ay soo ifbaxdo
Xafiiska Kingsoft wuxuu galaa meesha libreoffice uusan wali awoodin inuu ku qanciyo qofna, isdhexgalka.
Haye, iskuxirka Libreoffice wuxuu wacdaro ka dhigayaa… Si xun, laakiin wuu u riyaaqaa 😛
Waxaan ka hadlaynaa qolalka xafiisyada ee aan ahayn windows vs gnu / Linux.
Anigu waxaan ahay raacsan aamin ah LibreOffice, waxaan isku dayaa inaan hagaajiyo astaamaha ku jira.
Laakiin isdhexgalka nasiib daro in daacad la ahaado ma fiicna waxaad ku arki kartaa sanduuqa combo iyo daaqadaha soo baxa ee GNU / Linux.
SIDEBAR wali waa tijaabo waxayna leedahay qaladaad badan.
Haddii wax aan doonayo ay tahay in maalin maalmaha ka mid ah LibreOffice ay leedahay qoondada isticmaale FIREFOX tusaale ahaan iyo in XAFIISKA uu leeyahay dhammaad u dhigma kan baaraha baaraha.
Ilaa hadda waxaa jira mashaariic aad u muhiim ah oo laga shaqeynayo. Taasi waxay ubaahantahay in kubad lasiiyo waxyaabaha aan micnaha lahayn ...
Ku jawaab Nelson Lombardo
Kee baa fiican: Isticmaal qaab ama qalab? Sida saxda ah.
Hagaag Qt wuxuu noqon doonaa mid moodada imika laakiin waad ogtahay inay ku dambayn doonto gacanta Microsoft, waxay hore u iibsatay Nokia mobilada hoosaadkeeda, dhamaadka waxay iibsan doontaa wax walba; oo waad ogtahay cidda iska leh Qt.
Waxaan ku dheganahay GTK oo ah wax soo saarka GNU oo aan cidna iska lahayn.
Run, waxaan ilaaway in QT uu kujiro gacanta Nokia. Dhaqdhaqaaq xumo, hadda waxaan la yaabanahay haddii wax la mid ah wixii ku dhacay OpenOffice iyo MySQL ay dhici doonaan ka dib markii Oracle ay iibsatay Sun. Waxaan kaliya rajaynayaa in bulshada wax soo saarta ee QT aysan u kala qaybsanayn iibsashada Microsoft ee shirkadda Nokia.
Waxaan u maleynayaa in hadda in ka badan abid ay tahay sababta ugu horreysa ee Gnome loogu abuuray GTK ay macno badan samaynayso, si loo hubiyo xorriyadda barnaamijka.
Jawaab ku -ik-
Aamiin wixii ugu dambeeyay ee aad dhahdo, muuqaalka Gnome iyo Gtk kumuu aheyn duluc, hadaadan aheyn waxaad sheegaysid, kaba badin ama yari.
Way qaldan yihiin, mashruuca Gtk waa la bilaabay maxaa yeelay bilawgii Qt ma ahayn bilaash. Taas oo gebi ahaanba isbedeshay, way fududahay in la geliyo koodhka mashruuca Qt marka loo eego Gtk: s. Intaa waxaa dheer, Nokia mas'uul kama aha tan iyo markii isbadalki ugu dambeeyay ee agaasimaha guud, Digia uu mas'uul ka ahaa Qt waxayna yiraahdeen waxay ilaalin doonaan isla siyaasadaha horumarinta.
Ku jawaab carcaman
Nokia waxay Qt ka iibisay Digia sanad ka hor.
Intaa waxaa dheer, bulshada barnaamijka bilaashka ah waxay leedahay horumarin Qt oo bilaash ah oo loo isticmaalo KDE iyo barnaamijyadeeda.
Digia waxay qaadatay shatiyo kala duwan. QPL ee loogu talagalay codsiyada ganacsiga iyo GPL V2 / V3 ee horumarinta softiweerka bilaashka ah.
Haddii Digia ay bedesho siyaasadeeda shatiga berrito.
Go'aanka saameyn kuma yeelan doono horumarinta Qt ee barnaamijka bilaashka ah.
Sikastaba, wali ma jecli inay shirkad iska leedahay, ha noqoto digia, trolltech (magacaa) ama nokia. GtK cidna ma leh.
PD Nokia wali waxay leedahay aasaaska horumarka iyo xuquuqda lahaanshaha ee Qt.
Waxaan ku celinayaa, bulshada barnaamijyada bilaashka ah waxay leedahay horumarinteeda Qt ee bilaashka ah ee loo isticmaalo KDE iyo barnaamijyadeeda.
Maktabadahaan oo dhami waxay ku hoos jiraan shatiga GPL. Hadaad rabto weydii Elav iyo raga kale ee isticmaala KDE.
Waxaan dhihi karaa sabab macquul ah in horumarka gtk uu aad uga xiranyahay tan Qt, maadaama go'aanada oo dhami ay maraan waxyaabaha ku haboon Red Hat. Waan ogahay dadka ku soo rogay isbedelada Qt waana loo ansixiyay dhibaato la'aan iyo dadka kale ee doonayay inay ku soo rogaan khaladaadka cilladaha Gtk waligoodna ma ansixin iyaga oo aan bixin sharaxaad gaar ah
inay ka tirsan tahay beel (taas oo iyaduna been ah), macnaheedu ma aha in waxaad soo jeedisay lagu aqbalo korka, ficil ahaan ma jiro wax farqi ah oo u dhexeeya gtk iyo qt, marka laga reebo in gtk ay kun jeer ka xaddidan tahay
Nokia waxay go'aansatay dhamaan mashruucyadeeda iyadoo ku saleysan softiweer bilaash ah, oo ay kujirto Qt, oo laga iibiyey Digia, meego iyo kuwa kale.
Nokia iyo qt shaqo kuma laha
Qt kuma jiro gacanta nokia ... waxay ku jirtaa gacanta Digia waxaanan ka shakisanahay inay sii daynayaan digaaga yar ee ukunta dahabiga ah dhigaya.
Ku jawaab raptor
Waxa aanan fahmin maxaa yeelay ma mideeyaan dadaalada. Su'aal xafiiska Kingsoft waa lacag la'aan ???
Waxaan ku akhriyay halkaas inaysan ahayn ...
Waxaan u maleynayaa inay jirto meel dhexe, maxaa yeelay maheysid waxyaabo kale ayaa ka xun ama ka xun helitaanka fursado badan. Tan ugu wanaagsan ee aan u maleynayo waxay noqon laheyd ugu badnaan 3 walxood oo walxood, iyo in kuwani sifiican looga soocan yahay midba midka kale.
Waa software bilaash ah xirmadiisa (BILAASH) laakiin bilaash maahan.
Sidaas oo kale ayaa ku dhacda biraawsarka OPERA waa bilaash laakiin ma ahan bilaash.
Sidoo kale PICASA, FLASH ADOBE, ADOBE READER waa bilaash laakiin ma ahan bilaash.
KingSoft ma ahan lacag la'aan. Waa freeware qaabkeeda aasaasiga ah.
Weligay maan fahmin sababta xafiisyada xafiisyada sida Kingsoft / WPS Office iyo Google Docs ay sifiican ula jaan qaadayaan M $ Office si ka duwan Open / LibreOffice, oo ah mashruuc sannado badan oo waayo aragnimo ah, bulsho aad u tiro badan oo iskaashatooyin ah oo soo fiicnaanayay, iwm . Kadibna waxay si lama filaan ah u noqotey mid la yaqaan habeenka WPS Office oo aad uga sarreeya iswaafajinta iyo waxqabadka M $ Office.
Hagaag, qof kastaa wuxuu dhahaa Oh, intee qurux badan ayuu Officesoft Office leeyahay, sida uu u egyahay, iyo caynkaas. Laakiin waxa muhiimka ah? Ula jaanqaadida OpenDocument doc, docx, xlxs ...
Qofna ma dhahayo haddii aad ku furtid xaashida xisaabaadka qaaciidooyin aan Ingiriisiga ku jirin, wax walboo waxyeello ma gaadhaa, mise iyagaa aqoonsan?
Waxa aan arko waa waxa aan daabaco?
Waa inaad fiirisaa wixii ka dambeeya muuqaalka oo aad falanqeeysaa waxa otomatigani xafiiskiisu runtii u qalmo.
PS: Maahan barnaamij bilaash ah, ama wax furan, laakiin waa haddii ay rabaan inay ku turjumaan otomaatiga xafiiska bilaash.
Faa'iidooyinka Xafiiska Kingsoft:
Iswaafajin aad ufiican oo lasocda Microsoft Office
-Nice ay interface (si fiican u, waxa run ahaantii waa isku mid sax ah ugu dhow ee MS Office)
-Waa bilaash (freeware), uma baahnid rukhsad
-Waa iftiin cabbirkiisu yahay (qiyaastii 120MB oo ka duwan MS Office oo qiyaastii ah 4GB DVD).
-Waa cuntaa ilo ka yar kan LibreOffice, si dhakhso leh ayey u socotaa.
-Waa isku dhufasho badan (oo ay ku jiraan GNU / Linux)
-Dadka ka imanaya MS Office, way fududahay la qabsiga Kingsoft Office marka loo barbardhigo LibreOffice, maaddaama qaabkeeda ay isku mid tahay.
Faa'iido darrooyinka Xafiiska Kingsoft:
- Ma ahan lacag la'aan
-It ma taageerto OpenDocument
PS: Waxay kaloo leedahay WPS Office oo ah isla xafiiska Kingsoft (isla hal abuurayaasha) oo leh farqiga u ah inuu yahay Ingiriisi oo uusan kuhadlin Shiinaha
WPS waa magaca asalka ah ee Kingsoft Office, kaas oo loo soo gaabiyo codsiyada: Wdhaqan, Pciil iyo Swarqad hore. Waa wax iska caadi ah in codsiyada Shiinaha ay magac u yeeshaan Reer Galbeedka oo ka duwan dhiggooda xagga luqaddooda asalka ah. Hase yeeshe, waxaa jira codsi la yiraahdo QQ, oo iyadu lafteeda ah nidaam fariin deg deg ah oo u soo ifbaxay sida isku midka ah ICQ, laakiin markii dambe u xuubsiibtay inay noqoto fariin fariin deg deg ah oo heerkeedu yahay Windows Live Messenger oo hada dhamaaday qof walba.
Waxaan u maleynayaa inay caadi u tahay inay weydiistaan ​​tarjumaad, haddii ay u qaybiyaan barnaamijka bilaash. Arrin kale ayaa noqon doonta inay iyagu lacag qaadaan.
Waxaan la joogaa libreoffice waligey dhibaato dhibaatooyin isbarbar dhig ah uma arkin waxaan u isticmaalaa shaqooyinka U iyo aqrinta tilmaamaha ay iga soo diraan U lafta xafiiska $ illaa libreoffice iyo libreoffice-ka xafiiska $ aniga aniga wax cabasho ah kama qabo, way waafaqsantahay waxa aan u adeegsado wax ka beddelka furan iyo abuurista dukumiintiyada tilmaamaha mashruuca iwm aniga ahaanna aniga waa dhakhso anigu kama helo haba yaraatee is waafajin illaa iyo hadda ama dhibaato iyo astaamaha iyo in qurxintaas oo ah Blabla saafi aan macno lahayn codsiyada ugu quruxda badan leh waxa ugu xun hadaad rabto codsiyada quruxda badan barnaamijyada bilaashka ah ee winbug quruxsan maahan laakiin ujeedadooda si wanaagsan ayey ugu adeegaan
Waxaan u isticmaali jiray xafiiska 'Kingson Office' GNU / Linux tan iyo markii uu soo baxay nooca Ingiriisiga ah. Waxaan rajeynayaa inay maareeyaan inay ku daraan taageerada OpenDocument, maxaa yeelay OOXML waxay la shaqeysaa cajaa'ibyo.
Waxaan horey u adeegsaday QT kahor waana ka dhakhso badan yahay LXDE runti waan kugula talinayaa wax badan!
Waxay leedahay iswaafajin ka badan LibreOffice / OpenOffice, waxaan layaabay beddel wanaagsan oo hadday sii waddo hagaajinta waxay kala saari kartaa tartanka.
Stogram, macmiil iskutallaab ku leh barta Instagram
Kiniiniyada Cas ee Cyanide, Qaybta 3: Raadinta iyo Yacy